Laser ọnwụ nke spacer ntupu akwa na ụgbọ ala kpụ ọkụ n'ọnụ oche - Golden Laser - 体彩会开欧洲杯,在线买猜球平台软件,体彩竞彩网世界杯冠军
Ọbụghị sọsọ nri n’ime oche ahụ, ihe mkpuchi oche ahụ na-ekerekwa oke. Seat cover, mere nke akpụkpọ anụ nke sịntetik akpụkpọ anụ, adabara laser nhazi dị ka mma.CO2 laser ọnwụ usorokwesịrị ekwesị maka ịcha teknuzu textiles, akpụkpọ anụ na upholstery akwa na elu kpọmkwem. NaGalvo laser usorobụ ezigbo perforate oghere na oche mkpuchite. O nwere ike perforate ọ bụla size, ọ bụla ego na ihe ọ bụla okirikiri nhọrọ ukwuu nke oghere na oche-ekpuchi mfe.
Teknụzụ na-ekpo ọkụ maka oche ụgbọ ala bụ ngwa a na-ahụkarị ugbu a. Ihe omuma ohuru ohuru obughi mee ka ihe di nma ma mekwaa nlebara anya nye ndi oru. Ebumnuche kachasị mma nke teknụzụ ọkụ bụ ịmepụta nkasi obi kachasị elu maka ndị njem ma bulie ahụmịhe ịkwọ ụgbọala. Usoro ọdịnala iji rụpụtaoche ọkụ ọkụ na-ekpo ọkụbụ ịnwụ na-ebu ụzọ ma mezie waya waya ahụ na ọdụ ahụ. Azọ dị otu a na - ebute nsonaazụ na - adịghị mma na - eme ka ihe onwunwe kpochapụ ebe niile ma na - eri oge. Mgbelaser ọnwụ igwe, na aka nke ọzọ, simplifies dum n'ichepụta nzọụkwụ, mma mmepụta arụmọrụ, na-azọpụta mmepụta ihe na oge maka Nsukka. Ọ na-erite uru dị ukwuu maka ndị ahịa nwere ogo Oche Ihu Igwe.
Nwatakịrị ụgbọ ala oche, booster oche, oche okpomọkụ, oche oche okpomoku, oche kwushin, oche cover, ụgbọ ala nyo, idụhe akara oche, oche nkasi obi, armrest, thermoelectrically okpomọkụ ụgbọ ala oche
Copyright © 2005-2020 Wuhan Golden Laser Co., Ltd. Ikike Niile Echekwabara.